Madagascar : Fifamoivoizana : Nihena ny isan’ny mpandrindra | ONG Lalana Blog
Madagascar : Fifamoivoizana : Nihena ny isan’ny mpandrindra
Lasa mitohana ny fifamoivoizana satria vitsy amin’ireo « cadenceurs » 70 isa sisa no tena miasa.
Mitohana noho ny afitsoky ny taksibe ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Nihena ny isan’ireo mpandrindra ny fiara miasa.
Miteraka fanelingelenana. Maro amin’ ny toeram-piantsonana taksibe, ankehitriny, no tsy ahitana taratra ireny mpandrindra ny fifamoivoizan’ny taksibe na « ca­denceurs » ireny intsony. Tsy dia mivaky loha loatra amin’ ireny mpandrindra ny fifamoi­voizan’ny taksibe ireny ny kaoperativa ka izany no mahatonga izany. Miteraka fitohanan’ny fifamoivoizana izany satria samy tsy misy te-hiala amin’ny toeram-piantsonana ny taksibe raha tsy feno, hany ka mibahan-dàlana.
« Avy amin’ireto taksibe ireto no mahatonga ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Maharitra ela vao miala ireo tonga aloha eo amin’ny toeram-piantsonana, hany ka lasa mitandahatra mibahana arabe fotsiny ny tonga aty aoriana. Tsy manao na inona na inona, etsy andaniny, ny polisy, fa mitazam-potsiny », raha ny nambaran’Andriamialy Honorine, tompona fiara monina eny amin’ny 67 ha, izay miaina izany isan’andro isaky ny handeha hiasa eny Mahamasina.
« Ny fitombon’ny fiara mifamezivezy sy ny tsy fahampian’ny fotodrafitr’asa no mahatonga izany fitohanan’ny fifamoivoizana izany, fa tsy avy amin’ny taksibe. Tsy mbola nitombo ny isan’ny taksibe miasa eto efa ho efa-taona izay. Raha misy koa ny tsy fanarahan-dalàna dia mety ho avy amin’ireo mpitatitra vaovao niditra taty aoriana », hoy kosa ny nasetrin’ny filoha lefitry ny vondron’ny kaoperativam-pitaterana miasa an-drenivohitra na ny UCTU.
Tsy miavaka intsony
« Mbola miasa ireo cadenceurs, saingy tsy hita miavaka tsara intsony. Efa rovitra ny fanamian’ny sasany ka izay no tsy hahatsinjovana be loatra azy intsony eny amin’ny toeram-piantsonana. Efa misy anefa ny fiarahanay miasa amina mpiara-miombon’antoka hikarakara izany fanamiana mampiavaka ireo cadenceurs izany », raha ny nambaran’ny avy ao amin’ny UCTU hatrany.
« Mbola misy sy miasa fa somary goragora ireo cadenceurs karamain’ny kaoperativa isan’isany. Misy amin’ireo kaoperativa tokony hanome ny karama sy ny fikarakarana manokana azy ireo no tsy manatanteraka izany araka ny fifanarahana anatiny nifaneken’ny tsirairay hatrany am-boalohany. Etsy andanin’izay dia tsy mety hisalotra intsony ny akanjo hoentiny miasa amin’ny andavanandro ny cadenceurs satria tsy te-hampitovy ny tenany amin’ireo mpamafa lalana sy ireo mpibata entana eny Anosibe », hoy kosa ny fanazavana nomen’ny avy ao amin’ny vondron’ny kaoperativam-pitaterana miasa ivelan’ny renivohitra.